Soo-saaraha Nidaamka Isku Laabista Bi ee Ugu Fiican | Medo
Dhererka Dheer ee Ka Weyn 6M
Qaab Sir ah oo qarsoodi ah oo qarsoon
Ma Jiro Farqin U Dhaxeysa Laba Meel Oo Ku Meel Fiican
Nidaamka Qufulka otomaatiga ah ee Hawlgalka Fudud
MDZDM100 Nidaamka albaabka isku laaban ee xirmada
Nidaamka albaabka isku laaban ee isku dhafan kala jebinta kuleylka, jir cidhiidhi ah, silsilad qarsoon, iyo raad biyo cadeyn hooseeya leh waa MEDO MDZDM100, wajiga koowaad ee wejiga qarsoon ee isku laaban albaabka adduunka! MEDOdesigner wuxuu ku dhawaaqayaa sharaf: Waad weydiisataa taas. Waan sameyn karnaa itl
Nidaamka qufulka otomaatiga ah, iskudhaf aan macquul ahayn
Fasax kuleyliyaha labada jeer ah
Nidaamka qufulka otomaatiga ah: hal riix iyo hal riix oo la furo, mid jiid si loo xiro. Iskuxirnaansho aan macquul ahayn: iskudhafyo kaladuwan oo loogu talagalay boos beddelid iyo dabacsanaan.
Naqshadeynta dheecaanka gaarka ah
Naqshadeynta ka hortagga qanjaruufo: ilaalinta taxaddar leh iyo tixgelinta. Xagga geeska oo aan lahayn tiir leh naqshad jilicsan oo qarsoon.
Albaabada Isku-laabma ee MEDO ayaa ah lasocodka qumman ee qol kasta, u rogaya aagagga ay ku noolyihiin meelo dhalaalaya oo furan iyada oo laalaabaysa oo la isugu keenayo dhammaan dhinacyada dhinac dhinac ah. Iyada oo la adeegsanayo Nidaamka Isku-laabanida 'Corner Bi-Folding System', gidaarka oo dhan waa la waayi karaa si loo bixiyo aragti 360 ° ah
Shaash qarsoon | Qaabka ciriiriga ah
Markuu maareeyaha waxsoosaarku isku dayay inuu qariyo shaashadda albaabka laabanaysa, dadku waxay moodayeen inuu waalan yahay: Sidee bay taasi ku suurta geli kartaa?
Markii nashqadeeyayaasha MEDO ay isku dhafan yihiin kala-goynta kuleylka, jir cidhiidhi ah, duub qarsoon iyo waddo-biyood sare oo aan biyuhu ku xirnayn oo leh hal albaab oo isku laab
Way ku faraxsan yihiin inay ku dhawaaqaan: wax kasta oo aad rabto, waan ogaan karnaa!
LAAKIIN MUUQAAL WEYN
Mulkiiluhu wuxuu jacayl qoto dheer u qabaa qolka weyn wuxuuna ku rajo weyn yahay inuu helo dhul iyo raaxo weyn. In kasta oo goobtu aysan aad u weyneyn, haddana nidaamka albaabka isku laaban ee loo yaqaan'MD-100ZDM 'oo qarsoon ayaa u oggolaanaya in loo isticmaalo sidii meel ballaadhan oo gudaha ah oo loogu talagalay xilliyada firaaqada ah oo dhan, taasoo ka dhigaysa aagagga gudaha iyo dibaddaba inay si isku mid ah u galaan meel cabsi leh.
Hore: Daaqada Qaybta
Xiga: Nidaamka Darbiga Daaha